Inkqubo epheleleyo kunye nezahlukeneyo zediski yenkqubo yokuvelisa imveliso yenye yeendlela eziphambili zeHenan Zheng Heavy Industries. Sinamava ekucwangcisweni nasekusebenzeni kweendlela zemveliso yezichumiso ezahlukeneyo. Asigxili kuphela kwinkqubo nganye yekhonkco kwinkqubo yemveliso, kodwa sihlala siqonda iinkcukacha zenkqubo nganye kumgca wemveliso yonke kwaye siphumelele ngempumelelo kunxibelelwano. Sinikezela ngezisombululo zemigca epheleleyo kunye nethembekileyo ngokweemfuno zabathengi.
Umgca wemveliso yediski granulator usetyenziselwa ikakhulu ukuvelisa isichumisi esimbaxa. Ngokubanzi, isichumisi esidibeneyo siqulathe ubuncinci izondlo ezibini okanye ezintathu (i-nitrogen, i-phosphorus, i-potassium). Inempawu zomxholo ophezulu wezondlo kunye neziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa. Isichumisi esidityanisiweyo sidlala indima ebalulekileyo ekuchumiseni okulinganiselweyo. Ayikwazi ukuphucula kuphela ukusebenza kakuhle kwezichumiso, kodwa ikwakhuthaza isivuno esizinzileyo kunye nesiphezulu sezityalo. Umgca wemveliso yediski granulator sisisombululo esifanelekileyo sokufezekisa umgangatho ophezulu kunye nemveliso ephezulu yesichumiso esimbaxa. Umgca wemveliso unokuvelisa isichumisi se-NPK, isichumisi se-DAP kunye namanye amasuntswana ezichumiso zecompany.
Izinto zokwenza imveliso ziyafumaneka kwimveliso yezichumiso ezimbaxa
Izinto zokwenza imveliso yezichumiso ezimbaxa ziyi-urea, i-ammonium chloride, i-ammonium sulphate, i-ammonia engamanzi, i-ammonium monophosphate, i-diammonium phosphate, i-potassium chloride, i-potassium sulfate, kubandakanya udongwe kunye nezinye izinto ezizalisa.
3) Izichumisi zePhosphorus: calcium perphosphate, calcium perphosphate enzima, calcium magnesium kunye nephosphate fertilizer, phosphate ore powder, njl.
Umgca wemveliso yediski granulator uhambile, uyasebenza kwaye uyasebenza, ubume bezixhobo bumbane, ukuzenzekelayo kuphezulu, ukusebenza kulula, kwaye kufanelekile kwimveliso yebhetshi yesichumiso esimbaxa.
1. Zonke izixhobo zenziwe ngezinto ezinganyangekiyo.
2. Amandla emveliso anokuhlengahlengiswa ngokweemfuno zabathengi.
3. Akukho zinto zintathu zingcolisayo, ukonga umbane kunye nokhuselo lokusingqongileyo. Ihamba ngokuthe chu kwaye kulula ukuyigcina.
4. Umgca wemveliso yesichumiso somdibaniso awunako ukuvelisa isichumiso esiphakamileyo, esiphakathi kunye nesisezantsi, kodwa uvelise isichumiso semvelo, isichumiso esingaphiliyo, isichumiso sebhayoloji, isichumiso esimbaxa, njl.
5. Uyilo lomgca wemveliso uphelele, uyinzululwazi kwaye unengqiqo, kwaye iteknoloji iqhubekile.
Izixhobo zomgca wemveliso yediski yegranulator ibandakanya izinto zokugcina izinto → umxube (umxube) → idiski yenyani (igranulator) → umatshini wokugungxula igubu (ukujija phakathi kweemveliso ezingekho mgangathweni kunye neemveliso ezigqityiweyo) → isheyusi ethe nkqo (isaphula) → umatshini wokupakisha ozenzekelayo (ukupakisha) → Ukuhambisa ibhanti (uqhagamshelo lweenkqubo ezahlukeneyo) kunye nezinye izixhobo Qaphela: lo mgca wokuvelisa ulungiselelwe kuphela.
Inkqubo yokuhamba kwediski yemveliso yediski ye-granulator inokwahlulahlulwa ibe:
Okokuqala, hambisa izinto ezingasetyenziswanga ngokungqinelanayo. Izinto ezingafunekiyo zibandakanya urea, ammonium nitrate, ammonium chloride, ammonium sulphate, ammonium phosphate (ammonium phosphate, diammonium phosphate, calcium monophosphate, calcium carbonate), potassium chloride, potassium sulphate, njl.
I-disk engile yomatshini granulation umatshini isebenzisa ubume arc, kwaye ibhola uyila rate ukufikelela ngaphezulu kwama-93%. Emva kokuba izinto zingene kwipleyiti yegranulation, ngokujikeleza okuqhubekayo kwediski yegranulation kunye nesixhobo sokutshiza, izinto zibotshwe ngokulinganayo ukuze kuveliswe amasuntswana anomilo ofanayo kunye nemilo entle. Idisk granulator sisixhobo esibalulekileyo kumgca wokuvelisa isichumiso esimbaxa.
Ukupakisha yinkqubo yokugqibela yomgca wemveliso yesichumiso. Imveliso egqityiweyo ipakishwe ngomatshini wokupakisha wobungakanani ngokuzenzekelayo. Iqondo eliphezulu lokuzenzekelayo kunye nokusebenza okuphezulu akufezekisi kuphela ubunzima obuchanekileyo, kodwa kugqibe ngokugqibeleleyo inkqubo yokugqibela. Abasebenzisi banokulawula isantya sokondla kwaye basete iiparameter zesantya ngokweemfuno ezizezona.